चर्चित अभिनेत्री करिना कपुरको यस्तो बेइज्जत भयो यो कार्यक्रममा कि देख्दा तपाईलाई पनि लाज लाग्नेछ:: पुरा हेर्नुस तपाई दंग पर्नुहुनेछ पुरा हेर्नुस [ भिडियो सहित ] - Taja Report
Homeभिडियोचर्चित अभिनेत्री करिना कपुरको यस्तो बेइज्जत भयो यो कार्यक्रममा कि देख्दा तपाईलाई पनि लाज लाग्नेछ:: पुरा हेर्नुस तपाई दंग पर्नुहुनेछ पुरा हेर्नुस [ भिडियो सहित ]
चर्चित अभिनेत्री करिना कपुरको यस्तो बेइज्जत भयो यो कार्यक्रममा कि देख्दा तपाईलाई पनि लाज लाग्नेछ:: पुरा हेर्नुस तपाई दंग पर्नुहुनेछ पुरा हेर्नुस [ भिडियो सहित ]
August 31, 2018 भिडियो Comments Off on चर्चित अभिनेत्री करिना कपुरको यस्तो बेइज्जत भयो यो कार्यक्रममा कि देख्दा तपाईलाई पनि लाज लाग्नेछ:: पुरा हेर्नुस तपाई दंग पर्नुहुनेछ पुरा हेर्नुस [ भिडियो सहित ]
*नोट : [ भिडियो अन्तिममा छ हेर्नुहोला ]
क्यान्सर, यौन दुर्बलता, मुटु रोग जस्ता समस्याहरुबाट छुटकारा पाउन पोलेको लसुन
लसुन प्राय सबैको भान्सामा पाइने एक प्रकारको सब्जी तथा मसला हो । लसुन खानाले हुने फाइदाका बारेमा हामी मध्ये धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ । तथापी हामी लसुन सब्जी तथा मसलाका रुपमा प्रयोग गर्ने गर्दछौं। आज हामी तपाईंहरुलाई लसुन खानाले हुने फाइदाहरुका बारेमा जानकारी गराउँदै छौं । लसुन काँचो तथा यसलाई मसलाको रुपमा हामी मध्ये धेरैले प्रयोग गर्दै आएका छौं । तर यही लसुनलाई पोलेर खाने गरेमा विशेषगरी पुरुषका लागि यो अत्यन्तै फाइदाजनक साबित हुने गरेको अनुसन्धानले साबित गरेको छ।
आयुर्वेदमा लसुनका बारेमा अनेकौं फाइदा उल्लेख गरिएको छ। हामी मध्ये धेरैले लसुनलाई फरक फरक तरिकाले प्रयोग गर्ने गर्दछौं। कसैले यसलाई काँचो प्रयोग गर्ने गरेका छौं भने अरुले यसलाई सब्जी तथा अचारको रुपमा पनि प्रयोग गर्ने गर्दछन्। तर लसुनलाई पनि पोलेर खान हुन्छ र १ भन्ने विषयमा धेरैको जिज्ञासा हुनसकछ।
लसुनमा सल्फर नामक तत्वको मात्रा अत्यधिक हुन्छ। यसमा एलिसिन नामक तत्वको पनि मात्र उपलब्ध हुन्छ । अनि यीनै गुणका कारण लसुनले किटानुनासक तत्वालाई नष्ट पारिदिन्छ । यसमा उपलब्ध फंगल सँग लड्ने ताकत तथा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताका कारण कैयौं रोगका बिरुद्ध लसुनले रामबाणको काम गर्छ । अनि लसुनमाथि गरिएको एक अनुसन्धानले के देखाएको छ भने, यसमा लुकेको फाइटकेमिकल पुरुष स्वास्थ्यका लागि अति फाइदा जनक हुन्छ । उसो त आयुर्वेद चिकित्सकहरु प्रायजसो पुरुषहरुलाई राती भुटेको लसुनको ४/५ केस्रा खान सल्लाह दिन्छन् ।
आउनुहोस् लसुनकोे फाइदाका बारेमा जानकारी लिउ
१. सेक्स हर्मोन बनाउछ
लसुनमा एलिसिन नामक तत्व उपलब्ध हुन्छ, जसले पुरुषको सेक्स हर्मोनलाई बलियो र ठीक बनाउछ । यसको प्रयोगले पुरुषमा यौन दुर्बलता ठीक हुन्छ । अनि लसुनमा उपलब्ध सेलेनियम तथा अत्यधिक मात्रामा उपलब्ध भिटामीनले बीर्यको मात्रा ढाउनुका साथै गुणमा बृद्धी हुन्छ ।
लसुन प्रयोग गर्नाले शरीरमा तापमान तथा गर्मी उपलब्ध हुन्छ र चीसोबाट बचाउँछ । साथै यसमा क्यान्सरसँग जुध्न सक्ने शक्ति पनि उपलब्ध हुन्छ। लसुनलाई विशेषगरी प्रोस्टेट र ब्रेष्ट क्यान्सरबाट बचाउन सक्ने अचुक ओखतीको रुपमा लिइन्छ।
३. मुटुलाई बलियो बनाउँछ
भुटेको लसुनले ब्लड प्रेसर पनि नियन्त्रण गर्छ । त्यसैले उच्च रक्तचाप अर्थात् हाई ब्लड प्रेसरले ग्रसित व्यक्तिका लागि भुटेको लसुन सेवन गर्न सल्लाह दिने गरिन्छ, किनकि यसले बीपी (ब्लड प्रेसर) लाई नियन्त्रण गर्छ ।
४. पेटमा हुने समस्यालाई निको पार्छ
यदि तपाईको पेटमा समस्या छ वा चांडै इन्फेक्शनको शिकार हुनुपरेको छ भने, भुटेको लसुन खानुहोस्। यसको सेवन गर्नाले छाती पोल्ने समस्या, बान्ता तथा पेटमा हुने खराबी लगायतका समस्याहरु चाँडै हराएर जान्छ ।
सरकारी मोटरसाइकल ‘बिहानबेलुकी चाउमिन र पाउरोटी बेच्ने दिउसो आफन्तलाई सिकाउने’
कम्तीमा पचास जनालाई शेयर गरि आफु पनि स्वास्थ्य वनौ र अरूलाई पनि स्वास्थ्य बन्न प्रेरित गरौ,… (395)
जहाँ केटीहरु विवाह गर्न केटा नपाएर तड्पिन्छन [भिडियो हेर्नुहोस ] (267)
के तपाईंले फर्सीको मुन्टो खाने गर्नु भएको छ भने , हेर्नुहोस् यस्तो हुन सक्छ ! पढेर शेयर गरौ!!! (150)